Ukuphila kowesifazane wesimanje kuyashesha kakhulu. Kudingeka sisebenze, siye ezitolo, sima ngesitofu futhi unake umndeni. Kusihlwa, owesifazane unomuzwa wokuthi ulamula osikiwe, akekho isikhathi sokucabanga ngobuhle bakhe, ukucabanga okuwukuphela kokulala. Ngokuvamile ungayithola le nkulumo ethi "Nginomndeni futhi anginaso isikhathi sokuzibuka mina" njalonjalo. Ungaba kanjani kulesi simo, kunezindlela eziyishumi ezilula ukuthi ungabheka kanjani okuhle. Udinga ukwazi ukuthi konke kungenzeka futhi ungathola isikhathi sakho ozithandayo. Into esemqoka ukuqonda ukuthi usuku ngalunye luqukethe imikhuba encane nemikhulu. Ngemuva kwalokho, sisetshenziselwa ukuxubha amazinyo, ukuhlanza ekuseni, nokudla kwasekuseni. Futhi emva komsebenzi lo wesifazane, njengoba kuhamba nge-autopilot uqala ukulungiselela ekhishini, ukuba uhlanganyele nezingane, ukubukela i-TV, khona-ke indlu yangasese yangasese kanye nephupho.
Shintsha ezinye imikhuba ngezindlela eziwusizo kakhulu.
1. Ukuvuka, welula futhi ukumamatheka usuku olusha. Phela, namuhla unosuku olujabulisayo noluphumelelayo. I-Podbogodarit Amandla aphakeme kulokho onakho, impilo yakho bese uqala usuku olusha. Phela, isimo sengqondo esihle senza ubuhle nempilo. Ngakho-ke, uzothola inhlawulo yosuku lonke yamandla futhi kuyokusiza kakhulu.
Uma usukuma, phuza eyodwa noma amabili izibuko zamanzi ahlanzekile. Ungangeza ijusi kalamula noma uju. Isiphuzo esinjalo sizoqala umzimba wakho futhi usihlanze nge-toxin. Phakathi nosuku udinga ukuphuza amanzi ahlanzekile, ubeke endaweni evelele kunazo zonke ibhodlela, elizothela ukujwayelekile kwamanzi nsuku zonke, 1.5-2.0 amalitha amanzi futhi ungakhohlwa ukuliphuza.
3. Hlanza kahle. Amanzi ageleza emthonjeni ayingozi esikhumbeni. Faka indawo yokugeza ngamanzi kampompi, ugeze ngamabhodlela e-ice. Ukuze wenze lokhu, udinga ukufaka amafrimu amahhala, noma uhlanza amanzi ahlanzekile ngejikisi, ufanele ukugeza amanzi amaminerali afriziwe. Phela, ukuze uthole amanzi ahloswe njalo ekuseni, kungcono ukondla isikhumba nge-microelements ewusizo, amavithamini, ngenxa yalokho, ukubukeka kobuso kuzokwenza ngcono, ukukhanya okunempilo kuzovela. Shayela i-cube yeqhwa emaceleni ebusweni, ungakhohlwa ngesikhathi esifanayo mayelana ne-décolleté zone nentamo. Inqubo ayithathi isikhathi esiningi, faka enye yemikhuba yakho kwenye.
4. Esikhundleni sokuthenga amabhalsamu, sebenzisa ama-broth of chamomile, nettletle kanye ne-burdock. Thatha ilitha elilodwa lamanzi afudumele, engeza isipuni se-apula cider uviniga, bese ugeza izinwele zakho ngamanzi, lokhu kuzonikeza izinwele zakho zibe yi-sheen enhle. Esikhundleni se-apula cider uviniga, ungasebenzisa ijusi lemon.
5. Masks for the body and hands, neck and face.
Uma kungekho isikhathi sokwenza imaski ezivela ezingxenyeni ezahlukene, khona-ke wazi ukuthi ungenza imaski uma ulungiselela ukudla.
- Faka isicelo entanyeni, izandla kanye nobuso beqanda elimhlophe, elihlala egobolondo, uma upheka okuthile kumaqanda.
- Esikhathini sekhanda, sula amaqabunga etiye wetiya elimnyama, uma unezinwele ezinamafutha.
- Uma emva kokucindezela i-lemon, unama-half lemon, ngaphambi kokuba uyilahle, gubha izinwele zakho nezandla ngenyama ye-lemon.
- Mask ebusweni angenziwa emgqonyeni we-hercule noma e-semolina, amazambane ahlambulukile, i-cottage shizi, ukhilimu omuncu. Izinsalela ze-sunflower noma amafutha omnqumo zinganezelwa kumaski ngaphambi kokuyibeka ebusweni.
- Musa ukulahla izinsalela zemifino, amajikijolo nezithelo, ikhasi lika-izaqathe, ulamula, ama-apula kanye ne-orange uwaphendule ube yi-gruel, futhi uyisebenzise ebusweni bakho.
- Uju luyisiluleko esihle kakhulu semibimbi.
- Uma unesitokisi sekhofi, ingasetshenziswa njengesifo somzimba. Uma ukugaya kungcono, khona-ke ungasebenzisa leli khofi njengesikhala sombuso.
6. Isikhumba sizoba sihle futhi siyanwebeka, uma usigubha kabili ngosuku, ama-cubes afriziwe, ama-decoctions wamakhambi akho owathandayo.
Ukushaja. Sonke siyazi ngezinzuzo zokuzivocavoca umzimba, kodwa usuku lonke ukwenza imizuzu eyishumi yokuzivocavoca akulula. Ngemuva kwalokho, kubalulekile ukuziphoqa, ngakho-ke ufuna ukuphumula, ulale phansi.
Nanka lezi zindlela zokusiza ukufaka esikhundleni senkokhelo futhi ulahlekelwe isisindo.
- Zama ukukhuphuka izitebhisi, hhayi i-elevator. Lokhu kuzokusiza ukulwa neselula futhi kuzosiza ezinyaweni.
- Hamba okuningi, hhayi nje kuphela ezitolo, kodwa esikhundleni sebhasi ungahamba ngezinyathelo ezimbalwa.
"Ukudansa, kuyasiza futhi kumnandi."
- Yenza ukuhlanza futhi ngesikhathi esifanayo wenze ukunyakaza okusebenzayo, ukugoba ngaphezulu, ume ku-tiptoe.
- Hamba ngokushesha.
- Uma wenza imisebenzi yasendlini evamile, bhala imisindo "futhi", "y", "s", ngangokunokwenzeka ngangokunqoba imisipha, lezi zivivinyo zizokusiza ukulwa nenki yesibili.
8. Ungadli ngemva kwamahora angu-18. Kodwa kuyoba usizo ukuphuza ubisi olushisayo nobusi nezinongo ze-safari, i-fennel, i-cardamom. Kuyini ukukhishwa ubisi, zikhethele wena, qala ngo-¼ indebe ukuqala. Uma ekuseni kukhona umboco omhlophe olimini, ukunciphisa ukukhishwa ubisi, uma kungekho i-plaque, kancane kancane ulethe ingxenye engilazi yobisi.
9. Zama ukulala embhedeni imizuzu engu-15, uhambehamba emoyeni omusha.
10. Kusihlwa, welula izandla, intamo nobuso bekhilimu. Zonke izinto zokuzithokozisa zisebenza kakhulu futhi zithatha ebusuku, lapho izinga lokushisa lomzimba liyehla.
Lezi zindlela eziyishumi ezilula ukuthi ubukeka kanjani bukhulu kuzokusiza ukuthi uthathe imikhuba yakho emidala ngezindlela eziwusizo. Ngokuhamba kwesikhathi, ukubamba iqhaza, uzothola injabulo kubo, futhi inhlalakahle nokubukeka kuzoqhubeka kukujabulisa isikhathi eside. Ubuhle nempilo kuwe!
Indlela yokuhlukanisa isikhumba kusuka endaweni elandelayo
Indlela yokuhlobisa ijaji le-denim?
Umbala wemoto nge-feng shui
I-Backache ngemuva kwesondo - yini okufanele uyenze?
Ukuxilongwa, usongo lokuzalwa ngaphambi kwesikhathi
Shish kebab kusuka rabbit
U-Xenia Borodina washintsha kanjani: ngaphambi nangemva kwama-plastiki
Umquba we-pie neklabishi
Ukuthi umama wagula kakhulu, nokuthi umndeni wethu usinda kanjani
Isaladi senhliziyo nge shizi elibhemayo kanye ne-chicory
IJam kusuka ku-quince (i-Kiev)
Imininingwane emisha mayelana nokufa kwendodana kaRimer indodana kaMayagi yaziwa
Ukudla ku-sauce enhle futhi emuncu
Ama-shades ama-azure angu-50: ukwakheka kwehlobo ekhanyayo-2016
Ama-wafers ane uju nama-blueberries